people Nepal » फेरि बढ्यो डिजेल र पेट्रोलको भाउ! फेरि बढ्यो डिजेल र पेट्रोलको भाउ! – people Nepal
फेरि बढ्यो डिजेल र पेट्रोलको भाउ!
काठमाडौं, असोज २। नेपाल आयल निगमले पेट्रोल र डिजेलको भाउ फेरी बढाएको छ । सोमबार राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी निगमलेपेट्रोलमा प्रतिलिटर २ र डिजल तथा मट्टीतेलको भाउ प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ बढाएको हो ।
पेट्रोल लिटरको ११४ रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजेल र मट्टीतेलको भाउ १०१ रुपैयाँ भएको छ । निगमले यो मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय भाउ अनुसार स्वचालित मूल्य अनुसार समायोजन भएको जनाएको छ । इण्डियन आयल कर्पोरेशनबाट १६ सेम्टेम्बरमा प्राप्त मूल्य बढेर आएकोले मूल्य विश्लेषण गरी समायोजन गरिएको गोइतेले बताए ।
मूल्य बढाए पनि आयल निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर २ रुपैयाँ ९२ पैसा र डिजेलमा प्रति लिटर २ रुपैयाँ ७२ पैसा घाटा रहेको निगमका प्रवक्ता विरेन्द्र गोइतले जानकारी दिए । यस्तै एलपी ग्यासमा प्रति सिलिण्डर ३०९ रुपैयाँ ७९ घाटा रहेको छ । समग्रमा निगमलाई १५ दिनमा झण्डै ३१ करोड ६७ लाख घाटा हुने देखिन्छ ।
पछिल्लो १५–२० दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पट्रोलियम पदार्थको मूल्य उल्लेख्य रुपमा बढेको तथा अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली र भारतीय मुद्राको अवमूल्यन भएका कारण मूल्य समायोजन गरिएको निगमको दावी छ ।
यो समायोजन पछि भारतको रक्सौल भन्दा नेपालको वीरगंज तर्फको सीमा मूल्यमा पेट्रोलमा २९ रुपैयाँ ४४ प्रति लिटर र डिजेल २८ रुपैयाँ ४४ प्रति लिटरले नेपाल तर्फ नै सस्तो रहेको छ । यसअघि निगमले गत भदौ २० गते पेट्रोल डिजेल र मट्टीतेलमा भाउ बढाएको थियो । निगमले मूल्य बढाएपनि घाटा व्यहोरेको बताउँदै आएको छ ।